Faah faahin:- Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo xalay weerar aad u culus ku qaaday gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo xalay weerar aad u culus ku qaaday gobolka Sh/hoose
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar aad xoogan ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin deegaanka No-60 ee gobolka Sh/hoose.
Weerarkaasi ayaa sida la sheegay markiisi hore ku bilawday rasaas iyo baasuukayaal oo ay Al-shabaab ku rideen saldhiga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, wuxuuna markii dambe isku badalay dagaal fool ka fool oo labada dhinac halkaasi ku dhexmaray.
Waxaa habeenkii xalay deegaanka No-60 muddo kooban ka socday rasaas culus iyo hubka noocyadiisa oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac, iyadoona ilaa iyo haatan aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi.
Warbaahinta taageerta Al-shabaab ayaa goor sii horeeysay baahisay in dagaalyahano ka tirsan ciidankooda ay xalay weerareen deegaanka No-60 ee gobolka Sh/hoose islamarkaana ay qasaare lixaad ah halkaasi ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM.
Ilaa iyo haatan ma jiro warar madax banaan oo xaqiijin kara sheegashada Al-shabaab ay ku sheegteen inay weerarkaasi ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM.
Dhinaca kae, sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in Al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen xarunta ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku yaala deeganka No-60, islamarkaana iska caabin xoogan ay la kulmeen
Weerarkaasi ayuu sarkaalka ku sheegay inuu ahaa mid socday muddo kooban islamarkaana aanay wax qasaare ah kasoo gaarin dhinacooda.
Ugu dambeyntii, waxaa mudooyinkii ugu dambeysay sii kordhayay weerarada ay dagaalyahanadda Al-shabaab ka fuliyaan gobolada dalka gaar ahaan Sh/hoose, iyagoona weeraradaasi kadib gacanta ku dhiga deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolkaas.